Ny Trailer 'X' an'i Ti West dia nahazo ny naoty R Hard ho an'ny "Herisetra mahery vaika sy Gore"
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny Trailer 'X' an'i Ti West dia nahazo ny naoty R Hard ho an'ny "Herisetra Mahery Ra sy Gore"
Ny Trailer 'X' an'i Ti West dia nahazo ny naoty R Hard ho an'ny "Herisetra Mahery Ra sy Gore"
Taorian'ny Toa Folo Taona Ny Trailer Ti West dia eto
by Trey Hilburn III Janoary 12, 2022 10,218 hevitra
Efa nanisa ny andro hiverenan'i Ti West amin'ny fanoratana sy ny fanaovana sarimihetsika izahay. Taorian'ny nanomezana anay klasika avy hatrany taorian'ny horonan-tsarimihetsika mahazatra mahazatra toy ny Ny tranon’ny devoly, Ny mpiandry tranom-bahiny sy ny sakramenta, toa nanjavona tao amin'ny tontolon'ny fahitalavitra izy. Na izany aza, vaovao tsara, ianareo rehetra! West dia niverina niaraka tamin'ny X – sarimihetsika novokarin'ny A24 sy Bron.
In X Nisy ekipa mpanao sarimihetsika vetaveta nivoaka tany amin'ny toeram-piompiana iray mba hanao ny sangan'asany. Tsy fantatr'izy ireo fa ny olona nanofa ny trano fiompiana dia somary lany tamin'ny voany. Rehefa mandroso ny pôrnôgrafia, dia mitombo koa ny fandripahana rà. Ny West dia toa mamoaka horohoro hag mahafinaritra ho lasa mahazatra Texas Massacre manohana.
Ny synopsis ofisialy ho an'ny X mandeha toy izao:
Tamin'ny 1979, nisy andiana mpilalao sarimihetsika tanora nikasa hanao sarimihetsika ho an'ny olon-dehibe any ambanivohitr'i Texas, saingy rehefa tratran'ny mpampiantrano antitra izy ireo, dia miady ho an'ny ainy ny mpilalao.
Ankehitriny, manana naoty R mafy ilay sarimihetsika ary toa nahazo izany naoty ratsy izany tamin'ny fanantitranterana ny ampahany amin'ny “herisetra mahery vaika sy fandotoana”.
Miverina amin'ny fanoratana sy fitarihana i West ary arivo isan-jato no ao ambadik'izany. Nahagaga ny asany rehetra taloha. Noho ny antony sasany, niala tamin'ny fanoratana sy ny fitarihana ny entany manokana i West. Tsy hoe tsy niasa izy fa nandeha tamin'ny fahitalavitra ary nanomboka niasa tamin'ny andiany samihafa. Ny asa nosoratany farany sy notarihany dia tonga tamin'ny sary tandrefana valifaty, Ao amin'ny Lohasahan'ny Herisetra. Ilay sarimihetsika dia nahitana an'i Ethan Hawke sy John Travolta ary nanamarika ny famokarana lehibe indrindra any West hatramin'izao. Hafahafa tokoa ny nijery azy niala tamin’izany nandritra ny enin-taona.
Na izany na tsy izany dia niverina ny West ary avy eo ny sasany. Ny tranofiara ho an'ny X miteny ho azy amin'ny lafiny rehetra. Mikiakiaka fa miverina amin'ny teboka i West miaraka amin'ny asa sorany sy ny fitarihana toy ny hoe tsy nitsambikina mihitsy izy.
Kintan'ny sarimihetsika Brittany Snow, Mia Goth, Scott “Kid Cudi” Mescudi, ary Jenna Ortega.
X tonga amin'ny teatra manomboka ny 18 martsa.